မင်္ဂလာပါ - ကျနော်တို့စပိန်နိုင်ငံလုပ်နေကြတယ်
တွင် Posted 30 နိုဝင်ဘာလ 2018 By HB
ကျနော်တို့စပိန်မဂ္ဂဇင်းထဲမှာထားကြပါတယ်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်, ဆိုက်စတာတွေစပျစ်ရည်, ဒိန်ခဲ, ရီးယန်း, သံလွင်ဆီ, အဖြစ်စပိန်ကနေအကောင်းဆုံးအစားကောင်းကြိုက်သူများအတွက်ထုတ်ကုန်အပေါ်သတင်းအချက်အလက်ကိုတွေ့လိမ့်မည် သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့အံ့သြဖွယ်နေရာများ, ယင်း၏ပိုင်ရှင်တွေ, အကောင်းဆုံးပရိုမိုးရှင်းများ, ပု Gran မှတစ်ဆင့်နှင့်ပိုပြီးအပေါ်ပါဝင်သည်။
ကျနော်တို့စပိန်နိုင်ငံလုပ်နေကြတယ်ယဉ်ကျေးမှု, အစားအစာ, စပျစ်ရည်, ဂီတ ... တစ်ဦးစတိုင်ပုံမှန်အားဖြင့်စပိန်ဘဝနှင့်ခရီးသွားဧည့်အဖြစ်သို့မဟုတ်ဤကြီးမြတ်နိုင်ငံ၏နိုင်ငံသားအဖြစ်လည်းကောင်း, ထိုအံ့သြဖွယ်စပိန်သို့ delve ရန်လိုသူမည်သူမဆိုများအတွက်လမ်းညွှန်၏လောကဓာတ်ဖြစ်ပါတယ်။
Next post: Bodegas Navarro ဇျ
10.0.0.1 သူ says:
31 မှ 2018 ဒီဇင်ဘာလ 8: 20 ညနေ
ဒါဟာအဲဒီနေ့စွဲ rehashed ပစ္စည်းထဲကတူညီတဲ့မဟုတ်စဉ်တိုင်းတစ်ချိန်ကတစ်ဘလော့ဂ်ဖြတ်ပြီးလာရန်အကြီးပါပဲ။
အံ့သြစရာဖတ်ပြီးသား! ငါသည်သင်တို့၏ site ကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြပါတယ်ငါသည်လည်းသင်တို့၏ RSS ကိုကြှနျုပျ၏ Google အကောင့် feeds အပါအဝင်ပေါ့။
ဤ site သင်တို့သည်ငါတို့၏က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံကိုရသေချာစေရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။
သီးသန့်လုံခြုံရေး Preferences ကိုအဘို့အရေးစင်တာ
တစ်ဦးက cookie ကိုယင်း၏တပ်ဆင်ခြင်းများအတွက်တာဝန်ရှိ entity အားဖြင့် updated နှင့်ထုတ်ယူနိုင် data တွေကိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနိုင်ရန်အတွက်အသုံးပြုသူတစ်ဦး၏ terminal ကိုပစ္စည်းကိရိယာများမှဒေါင်းလုပ်လုပ်ကြောင်းဖိုင်တစ်ဖိုင်သို့မဟုတ်ကိရိယာဖြစ်သည်။ ဒါကဟုပြောရန်ဖြစ်ပါသည်အချို့သော web page များကိုဝင်ရောက်ဖို့သင့်ကွန်ပျူတာသို့ download လုပ်ကြောင်းဖိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကွတ်ကီးသည်အခြားအမှုအရာတို့တွင်အ website တစ်ခုကိုခွင့်ပြု, စတိုးဆိုင်နှင့် browsing အတွက်အသုံးပြုသူတစ်ဦး၏အလေ့အထများသို့မဟုတ်သင့်ကွန်ပျူတာ, သူတို့ကမဆံ့တဲ့အချက်အလက်တွေအပေါ်မူတည်ပြီးသင်ကသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုအသုံးပြုလမ်းအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရယူ, အသိအမှတ်မပြုဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် အသုံးပြုသူ။
အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုဒီ site ကိုသုံး cookies များကိုလော
ဒါဟာ web page ကိုအသုံးပြုသူအသုံးပြုမှုလွယ်ကူချောမွေ့ရန်ခွင့်ပြုကြောင်း cookies တွေကိုသုံးပြီးထိုတရားအားဖြင့်သွားလာ, အချို့ဝန်ဆောင်မှုများကို access ကိုသေချာနှင့်ဝဘ်၏အလုပ်လုပ်တဲ့ configuration ကိုတိုးတက်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။
အထူးသ, ဒီ website မှာအောက်ပါ cookies များကိုအသုံးပြုသည်:
analysis ကွတ်ကီး: အဲဒီ cookies တွေကိုစွမ်းဆောင်မှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုများဖြစ်စေနိုင်ရန်အတွက်တစ်အပြုအမူနှင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်အသုံးပြုသူများ၏လုပ်ရပ်များ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအဖြစ်အညွှန်းပရိုဖိုင်အတွက်ဖျော်ဖြေဖို့အသုံးပြုကြသည်။
အဲဒီ cookies တွေကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့အသုံးပြုတဲ့ application ကို Google Analytics မှ (www.google.com/analytics/) ပိုင်ဆိုင်
သင့်ရဲ့ cookie ကို setting များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဒီအပိုဒ်ထဲမှာဘယ်လိုတိုင်ပင်၏အကျဉ်းကြေညာချက်ထွက်ယူသွားတတ်၏နှင့်သုံးစွဲသူများကအသုံးပြုအသုံးအများဆုံးသို့မဟုတ်အများဆုံး browser များနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်စနစ် Configuration နဲ့ cookies တွေကိုလုပ်ဆောင်။
ဒီအသိမှာတော့အားလုံးနီးပါး browser များအထူးသ Mimas, ကြာချိန်သို့မဟုတ်စွန့်ပစ်ခြင်းစနစ်၏တည်ရှိမှုကိုအတည်ပြုရန်အသုံးပြုသူများဝဘ်စာမျက်နှာပေါ်တွင် install လုပ်ပြီး cookies များကိုအကြောင်းကိုယေဘုယျသတင်းအချက်အလက်ရရှိရန်ခွင့်ပြုပါ။ ဤကိစ်စတှငျသတငျးအခကျြအဘို့, ဆက်စပ်လင့်များ၏နံပါတ်ပေးထားကြသည်:
- Google Chrome က:
- က Internet Explorer:
- Mozilla Firefox ရဲ့:
ထို့အပြင်အသုံးပြုသူ, ခွင့်ပြုပိတ်ပင်တားဆီးမှုသို့မဟုတ်မြို့သားညွှန်ကြားချက်နှင့်အညီသင့် browser setting များကိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းအားဖြင့်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိ installed cookies များကိုဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်။ သတင်းအချက်အလက်အဘို့အများအားဖြင့် cookie ကို setting များကိုများသောအားဖြင့်က "Preferences ကို" မီနူးသို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီ browser ၏ "Tools များ" တွင်ထွက်သယ်ဆောင်ဖြစ်ကြောင်း, မည်သည့်အမှု၌, သင်အမြဲဖြေရှင်းကူညီသင့် browser ကိုသွားသို့မဟုတ် solventas သံသယနိုင်ပါတယ်ညွှန်ပြ အရာလေးစားမှု generate ပါလိမ့်မယ်။
ဒါဟာအားလုံး cookies တွေကို၏ installation တားဆီးလျှင်, ထို web ၏အကြောင်းအရာများကိုအဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့တူညီသောပေးအချို့သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုထိခိုက်စေခြင်းငှါသတိပြုသင့်ပါတယ်။